FADINTSERANANA: MANKALAZA NY FAHA-200 TAONANY
On jan 30, 2020 7 506
Mankalaza ny faha-200 taony ankehitriny ny Fadintseranana Malagasy. Notanterahana teny amin’ny hotely, Carlton, Anosy ny Talata lasa teo ny fanamarihana sy fisokafan’ny fankalazana. Nitarika ny lanonana ny minisitry ny vola sy ny toekarena Randriamandranto Richard, notronin’ny mpiasa rehetra niaraka tamin’ny tale jeneraly ZAFIVANONA ERNEST LAINKANA.
Amin’izao fanamarihana ny tsingerintaona faha-200 izao, misy ny paikaday maro vaovao hapetraky ny mpitantana eto Madagasikara. Nisantarana izany ny paikady narafitra ao amin’ny drafitrasa ho an’ny taona
2020-2023. Manana tanjona henjana sy lavitra ihany ny fadintseranana, araka ny tenin’ny mpandaha-teny, nandritra ny lanonana. Anisan’ny fanamby ny famoahan’entana aingana, anatin’ny ora roa na telo monja aorian’ny fahatongavany sy ny fahavitan’ny taratasy rehetra ilaina, fa tsy roa na telo andro tahaka ny misy ankehitriny. NY entana mandalo » Scanner » dia ezahana ny ho tafavoaka anatin’ny ora valo.
Ho jerena manokana ihany koa ny lafin’ny fifehezana ny mpiasa mba tsy ho voasarika amin’ny kolikoly.
Navoitra ny Minisitra tamin’ny kabariny fa hisy ny fametrahana ny Akademian’ny Fadintseranana.
GOVERNEMANTA: MAHATRATRA VALO NY MINISITRA VEHIVAVY